Ahụ ike na-echebe | qiangjing
Na usoro mmega ahụ, ọ dịịrị anyị mfe bute nsị akwara na akwara n'ihi mkparị. Mgbe akwara akwara na akwara bidoro, anyị ga na-enwe ihe mgbu. Ọ bụ ezie na mmega ahụ dị mma maka ahụike anyị, ọ pụtara mmega ahụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na anyị anaghị akpachapụ anya maka mmega ahụ, anyị nwere ike imerụ ahụ. Echebe jikoro ga imebi ihe. N'ime usoro mmega ahụ, ọ na-eduga n'ịka nká ngwa ngwa na ime nke nkwonkwo ikpere, ikpere aka na akụkụ ndị ọzọ, yabụ anyị kwesịrị iji ngwa nchebe egwuregwu iji chebe akwara na ọkpụkpụ anyị mgbe anyị na-eme mmega ahụ.
Kacha ngwangwa akụkụ nke ahụ mmadụ na nkwonkwo na ọnọdụ, dị ka nkwojiaka, n'ikpere aka, ubu, ikpere, na nkwonkwo ụkwụ, n'úkwù, azụ, olu na na na. Ezubere ihe eji egwu mmiri n’egwuregwu dị iche iche. Dabere na akụkụ gị merụrụ ahụ, họrọ ihe nchedo dị mma maka ahụ gị. Imirikiti ngwaọrụ nchebe bụ igwe, roba, eriri polyester na kemịkal ndị ọzọ nke ihe dị iche iche. Ha nwere uru dị na nguzogide tensile, isi ike, mmetụ ahụ dị mma na ikuku dị mma. Ha na-enyere aka na ntinye aka na ntinye iji dozie nrụgide na idozi, melite nkwụsi ike nke nkwonkwo na akwara, mee ka ha nọrọ n'ọnọdụ nrụgide kwesịrị ekwesị, ma chebe nkwonkwo n'oge mmega ahụ. Anụ agaghị emerụ site na mmegharị siri ike ma ọ bụ ịgbatị agbatị.
Ezi mmejuputa atumatu gha enwe ihe ndia.
Nchedo na mweghachi: Nke a bụkwa ihe kachasị mkpa maka ngwaọrụ nchebe. Mgbanwe nke nrụgide nke ngwaọrụ nchebe ịgbatị akwara nwere ike belata ihe mgbu, kwalite metabolism ma melite nkwụsi ike nke nkwonkwo. Ọ na - enwe mmetụta mgbazi dị mma n'akụkụ akụkụ ndị merụrụ ahụ ma gbochie mmerụ ahụ. Fabkwà ndị dị nro na-eji ụzọ dị iche iche eji arụ ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ pụrụ iche na ikuku zuru oke, nwere ike ịmịpụta nrụgide na mmetụta ahụike. Ọ nwere ike ịchụpụ mmiri mmiri ngwa ngwa, nke dị ezigbo mkpa maka mgbake.
Compressibility na Nkwado: Agụdo nchebe egwuregwu nwere nka ọrụ aka, na-agbaso atụmatụ nke akụkụ nchekwa ahụ. Ọ na-akwado nkwado na ndọtị mgbazi nke anwansị nchekwa ahụ, na-eme ka ike na nkwụsi ike nke akwara ahụ kpuchie ma ghara ịhapụ ọrụ nchebe, ma na-ahụkwa na akụkụ ahụ nwere mgbanwe dị mma nke ukwuu. Dinggbakwunye mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe siri ike na ụfọdụ ngwaọrụ nchebe nke chọrọ nchedo pụrụ iche iji wusie nkwado ike inye aka ijigide nkwụsi ike na njiri ụja nke nkwonkwo n'oge ngagharị nke akụkụ nchebe. Belata ohere mmerụ ahụ dị n'ihi ike adịghị mma ma ọ bụ oke ike ọgwụgwụ. N'ozuzu akwa mkpuchi na arụmọrụ dị mma na-enye nchedo kacha mma maka akụkụ ndị merụrụ ahụ ma zere ihe mmerụ nke abụọ.
Ijigide ọkụ na ikpo ọkụ ikuku: njigide ọkụ bụ idobe ọkụ nke anụ ahụ na ọnọdụ mmega ahụ ka ọ ghara ịfufu ngwa ngwa, ka akụkụ ndị chọrọ nchebe ghara inwecha nsogbu ma nwekwa ike iweghachi ya nke ọma. N'otu oge ahụ, anyị dịkwa mkpa iji hụ na ikuku zuru oke, n'ihi na mmega ahụ ga-agbanye ọsụsọ, ikuku nke ọma, nke mere na ọsụsọ nwere ike wepu ngwa ngwa, ka akụkụ nke ngwugwu ahụ wee kpọọ nkụ ma nwee ahụ iru ala. Ezigbo ihe eji eche nche abụghị naanị mmetu ọsụsọ dị mma, kamakwa ọ nwere ike ime ka mmiri ghara ịdị na-egbu oke ikuku. Mmetụta mgbochi nke ikuku bụ ọkwa mbụ, nke nwere ike ime ka ị nọrọ n'ọnọdụ dị mma na egwuregwu ma nwee ahụ iru ala na mgbake.
Oge nzipu ozi: Jun-17-2020